Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » United Airlines: Qaado jab COVID-19 ama lumo
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
United Airlines: Jeegaan qaado ama lumo
Shaqaalaha United Airline ee diida tallaalka COVID-19 looma oggolaan doono inay galaan goobta shaqada wixii ka dambeeya Oktoobar 2.
United Airlines waxay ku dhawaaqday waajibaadka tallaalka COVID-19 ee shaqaalaha.
United Airlines oo diida jabinta COVID-19 waa la eryi doonaa.
Shaqaalaha dayuuradaha leh ka -dhaafitaannada tallaalka waxaa lagu meelayn doonaa fasax aan xad lahayn.
Qoraal shirkad ah oo la diray shalay, United Airlines waxay ku dhawaaqday in dhammaan shaqaalaha diyaaradda ee ka hela ka -reebitaan diimeed, caafimaad ama shaqsiyeed tallaalka coronavirus ee khasabka ah loo diri doono fasax aan mushahar lahayn ama caafimaad muddo aan la cayimin, iyadoon loo eegin sababtooda ka -dhaafitaanka ama xaaladda.
“Marka masiibada si macno leh dib u dhacdo, waxaa lagugu soo dhaweyn doonaa kooxda xaalad firfircoon,” duuliyeyaasha, shaqaalaha duulimaadka iyo wakiillada adeegga macmiilka-oo lagu tilmaamay inay yihiin shaqaale ku jira “doorarka wajahaya macaamilka”-ayaa lagu sheegay qoraal.
United Airlines shaqaalaha aan si toos ah ula macaamilin rakaabka, sida dirayaasha iyo makaanikada, oo loo oggolaaday ka -reebitaan ayaa laga rabaa inay isbuuc walba tijaabiyaan oo ay xirtaan maaskaro mar walba marka ay shaqada joogaan, oo ay ku jirto marka dibadda.
Qof kasta oo la siiyo ka -dhaafitaan caafimaad waxaa la gelin doonaa fasax caafimaad oo ku -meelgaar ah. Kuwa la diido codsigooda ka -dhaafitaanku waa inay qaataan tallaalka ugu horreeya Sebtember 27 oo si buuxda loo tallaalo shan toddobaad gudahood ama ay waayaan shaqadooda guud ahaan, sida ku cad qoraalka uu soo diray Ku -xigeenka madaxa shaqaalaha Kirk Limacher.
Maamulka United Airlines ma aysan cayimin sida diyaaraddu u doonayso inay si dhab ah u siiso codsiyada ka -dhaafitaanka, shirkadduna ma sheegin inta ay heshay.
United waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee Mareykan ah ee ku soo rogtay waajibaad tallaal COVID-19 shaqaalaheeda 67,000 iyo ka badan, horraantii Ogosto. Shirkadaha duulimaadyada kale waxay u guureen inay joojiyaan ilaalinta mushaharka shaqaalaha aan la tallaalin ee laga helo fayraska. Delta Air Lines ayaa ku dhuftay lacag dhan $ 200 oo ah khidmadaha daryeelka caafimaadka ee shaqaalaha aan la tallaalin.
Shirkadaha Mareykanka iyo hay'adaha dowladda waxaa sharci ahaan looga baahan yahay inay bixiyaan ka -dhaafitaanno sababo diimeed ama caafimaad, in kastoo aysan si dhab ah u siin. Maamulka Biden wuxuu riixayaa waajibaadka tallaalka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay maadaama tirada kiisaska COVID-19 ee Mareykanka ay sare u kacday xagaaga.
Duulimaadyada, iyo duuliyeyaasha iyo ururada shaqaalaha duulimaadka ayaa si xamaasad leh u aqbalay kordhinta sida muuqata aan xad lahayn ee waajibaadka maaskaro ee dowladda, oo markii hore la soo rogay Febraayo oo loogu talagalay inay socoto 100 maalmood.
United waa diyaaradda afaraad ee ugu weyn diyaaradaha Mareykanka tirada rakaabka qaada, laakiin waxay leedahay maraakiibta labaad ee ugu weyn waxayna u adeegtaa meelaha ugu badan, sida ku cad tirakoobka ka hor aafada.